SarcoidosisUK သူနာပြုတိုင်ကြားမှု 500th ခေါ်ဆိုမှုကို
အားဖြင့် SarcoidosisUK | နိုဝင်ဘာ 1, 2018 | အားလုံးရေးသားချက်များ, သတင်းအချက်အလက်, သူနာပြုတိုင်ကြားမှု, SarcoidosisUK, ထောက်ပံ့, ဝက်ဘ်ဆိုက်
ဒါကြောင့် 2016 ခုနှစ်တွင်စတင်ဖွဲ့စည်းင်ကတည်းက SarcoidosisUK သူနာပြုတိုင်ကြားမှုလူ 500 ကူညီပေးခဲ့တယ်! ကျနော်တို့ကဒီအောင်မြင်မှုကိုအလွန်ဂုဏ်ယူကြသည်။ Sarcoidosis လူနာမကြာခဏစီမံခန့်ခွဲခြင်းလက္ခဏာများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အခြေအနေသို့မဟုတ်ထောက်ခံမှုတွေအကြောင်းနည်းနည်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူမှောင်မိုက်၌ကျန်ရစ်နေကြပါတယ်။ အဆိုပါ ...
Neurosarcoidosis လူနာ? ကျွန်ုပ်တို့၏နယူး Support Group မှ join
အားဖြင့် SarcoidosisUK | သြဂုတ် 22, 2018 | အားလုံးရေးသားချက်များ, အသိအမြင်, ပါဝင် Get, သတင်းအချက်အလက်, SarcoidosisUK, ထောက်ပံ့, ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့များ, Uncategorized, ဝက်ဘ်ဆိုက်
SarcoidosisUK sarcoidosis လူနာမကြာခဏသူတို့ရဲ့အခြေအနေနှင့်အတူအလွန်အထီးကျန်ခံစားရကြောင်းကိုငါသိ၏။ Neurosarcoidosis (NS) ပင်အလွန်ရှားပါးတဲ့သည်နှင့်, မရရှိနိုင်နည်းနည်းအထူးကုထောက်ခံမှုနှင့်အတူ, NS လုံးဝပျောက်နှင့်ရှုပ်ထွေး feeling လူနာစွန့်ခွာနိုင်ပါတယ်။ အသစ် SarcoidosisUK ...
အားဖြင့် SarcoidosisUK | သြဂုတ် 17, 2018 | အားလုံးရေးသားချက်များ, သတင်းအချက်အလက်, SarcoidosisUK, ထောက်ပံ့, ဝက်ဘ်ဆိုက်
သူတို့ရဲ့အသည်းထဲမှာ sarcoidosis ၏ 70% ပြပွဲဆိုင်းဘုတ်များ! ဒါဟာကောင်းကောင်းအသည်း၏ Sarcoidosis, သို့မဟုတ် 'Hepatic sarcoidosis' sarcoidosis နှင့်အတူလူနာအများစုထိခိုက်စေသောလူသိများသည်မဟုတ်။ တကယ်တော့သူတို့၏အသည်းထဲမှာ sarcoidosis ၏ 70% ပြပွဲဆိုင်းဘုတ်များမှတက်။ သတင်းကောင်းတစ်ခုကိုအများဆုံးဖြစ်ပါသည် ...
အသက်ရှူနှင့် Little ကအောငျမွငျမှုမြားအတှကျကြေးဇူးတငျဖြစ် - Sarcoidosis စီမံခန့်ခွဲပေါ်မှသင့်သိကောင်းစရာများ
အားဖြင့် SarcoidosisUK | ဇွန်လ 18, 2018 | အားလုံးရေးသားချက်များ, အသိအမြင်, ပါဝင် Get, သတင်းအချက်အလက်, SarcoidosisUK, ထောက်ပံ့, ဝက်ဘ်ဆိုက်
နောက်ဆုံးအပတ်က SarcoidosisUK Facebook မှာ Group မှအကျိုးစီးပွားနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအများကြီးလက်ခံရရှိနေတဲ့ post ကိုအပေါ်: "လူတိုင်းကသူတို့ sarcoid ခရီးအပေါ်တခြားသူတွေကိုအပြုသဘောအစွန်အဖျားသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်အကြံပြုလျှင်ကောင်းသောဖြစ်စေခြင်းငှါအတွေး: သင်သည်အဘယ်သို့ကူညီပေးခဲ့တယ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်မဆိုအကြံဥာဏ်သို့မဟုတ်အမှုအရာ ...